12 Zvino Jobho akapindura, akati: 2 “Chokwadi imi ndimi vanhu vacho, Uye uchenjeri huchafa pamwe chete nemi!+ 3 Iniwo ndine njere+ sezvamakaita. Handisi munhu akaderera panemi,+ Uye ndiani asina zvinhu zvakadai? 4 Ndava munhu anosekwa nowokwake,+ Munhu anoshevedzera kuna Mwari kuti amupindure.+ Munhu akarurama, asina chaanopomerwa ndiye anosekwa. 5 Munhu asinganetseki anozvidza kutsakatika mukufunga kwake;+ Kunogadzirirwa vaya vane tsoka dzinogweda-gweda.+ 6 Matende evapambi haanetseki,+ Uye vaya vanotsamwisa Mwari vakachengeteka Souya anounza mwari ari muruoko rwake.+ 7 Zvisinei, ndapota, bvunzai zvipfuwo, uye zvichakurayiridzai;+ Nezvisikwa zvokumatenga zvine mapapiro, uye zvichakuudzai.+ 8 Kana kuti ivai nehanya nenyika, uye iyo ichakurayiridzai;+ Uye hove dzomugungwa+ dzichakuzivisai izvo. 9 Ndiani asinganyatsozivi pane izvi zvose Kuti ruoko rwaJehovha ndirwo rwakaita izvi,+ 10 Iye ane mweya+ yevanhu vose vapenyu muruoko rwake Uye simba roupenyu renyama yose yevanhu?+ 11 Nzeve haiedzi mashoko+ Sokuravira kunoita rurimi+ zvokudya here? 12 Hapana here uchenjeri pakati pevakura+ Nokunzwisisa mukuwanda kwemazuva? 13 Iye ane uchenjeri nesimba;+ Ane zano nokunzwisisa.+ 14 Tarirai! Iye anoputsa, kuti parege kuva nokuvakazve;+ Iye anovharira munhu, kuti parege kuvhurwa.+ 15 Tarirai! Iye anodzivisa mvura, iyo yooma;+ Anoituma, yochinja nyika.+ 16 Iye ane simba nouchenjeri hunobatsira;+ Munhu anokanganisa nomunhu anotsausa ndevake;+ 17 Iye anoita kuti makurukota aende asina shangu,+ Uye anoita kuti vatongi vapenge. 18 Anosunungura zvisungo zvemadzimambo,+ Uye anosunga bhandi muhudyu mavo. 19 Anoita kuti vapristi vafambe vasina shangu,+ Uye anowisira pasi vaya vagere zvechigarire;+ 20 Anoita kuti vakatendeka vave mbeveve, Uye anobvisa kuchenjera kwevakwegura; 21 Anodururira kuzvidzwa pane vanokudzwa,+ Uye anosunungura mabhandi evane simba; 22 Anobudisa pachena zvinhu zvakadzama zviri murima,+ Uye anobudisa chiedza pane zarima; 23 Achiita kuti marudzi akure, kuti aaparadze;+ Achiparadzira marudzi, kuti aende nawo; 24 Achibvisa njere dzevakuru vevanhu vomunyika, Kuti avadzungairise munzvimbo isina chinhu,+ musina nzira. 25 Vanotsvangadzira murima,+ musina chiedza, Kuti avadzungairise sezvinoita munhu akadhakwa.+